रात परेपछि म,लाई किन से ’क्स चा,हना बढी हुन्छ ?(भिडियो हेर्नुहोस) - Samachar Post Dainik
रात परेपछि म,लाई किन से ’क्स चा,हना बढी हुन्छ ?(भिडियो हेर्नुहोस)
सन्ध्या बंसल एक नामी कम्पनीमा मार्केटिङ अफिसरका रुपमा काम गर्छिन् । उनी दिल्ली एनसीआरमा फ्ल्याट लिएर एक्लै बस्छिन् ।उनीएक्लै बस्नुको कारण हो, उनमा यौ न चाहना छैन । केटा वा केटी कसैप्रति पनि उनी आकर्षित हुन सक्दिनन्। अर्थात् उनी ‘एसे’क्सुअ’ल’ हुन् ।”त्यसैले उनले विवाह गरेकी छैनन् । तर, परिवारका विषयमा भने उनको आफ्नै धारणा छ । एउटा सुखी र खुसी परिवारमा श्रीमान–श्रीमती र छोराछोरीहुनैपर्छ भन्ने
मान्यतालाई उनी अस्वीकार गर्छिन् ।
*** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक
श्रीमान विदेश मा हुने महिला हरु धेरै देख्न पाइन्छ । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
गर्नुहोला ****आफ्नो श्रीमानलाइ तनाव नदिनु, नेपाली श्रीमान साच्चिकै देवदुत सावित हुनेछ्न मेरो भनाइमा सहमत हुनेले सेयर गर्नुस। म पनि महिला हु तर श्रीमानलाई बिगार्ने महिलानै हुन्। हामी महिलाहरु ले नै पुरुषलाई भ्र’ष्टाचारी जड्याहा। पर स्त्री गमन ‘बाहिर मन तन डुलाउने घरमा बस्न मन नगर्ने’ एस्तो स्वभाव को हुन बाध्य बनाउछौ।आफ्नो श्रीमानलाइ अनावश्यक तनाव ‘अरुको धन सम्पत्ती वा गहना सङ्ग तौलेर’, अनावश्यक
केयर बारम्बार निगरानी केरकार, माइती वा साथीहरू आफन्तको सामु हेपेर वा होच्याएर बोल्ने यस्ता काम कहिले नगर्नुहोस्.नेपाली श्रीमान साच्चिकै देवदुत सावित हुनेछ्न ग्यारेन्टी।सामाजिक सञ्जालमा राखिएका पोस्टहरु गरिएका टिप्पणीहरु देख्दा ताजुब लागेर आउँछ। होइन, हामी नेपाली के भयौं यस्तो, हामीमा कुनै सकारात्मक भाव नै छैन कि जस्तो। यिनै विषयहरु मनमा खेलिरहेका थिए। यो नकारात्मक सोचले भरिएको समाज नै छोडेर कतै एकान्तमा गएर बसुँबसुँजस्तो लाग्ने भइसकेको छ। मनमा
भएको खटपट कम हुन्छ कि भनी साँझ पशुपतिको आरती हेर्न जान मन लाग्यो।
पशुपति पुग्दा आरती सुरु भइसकेको थिएन। मानिसहरुको चाप बढ्दो थियो। म पुलमा बसेर त्यही भीड हेरिरहेको थिएँ। यता बाग्मतीको किनारमा लास जलाइरहेका थिए, पशुपतिअगाडि आरती हेर्ने मानिसहरुको हुल थियो।
मानिसको जीवन के नै छ र ? कुन दिन मर्ने अत्तोपत्तो छैनझैं लाग्यो, एकछिन त्यही जलाइरहेको लास हेरिरहें। तर, त्यो पीडाभन्दा खुशी हुन त मानिसहरुको भीड नै उपयुक्त लाग्यो।एकछिनमा आरती सुरु भयो। त्यो धुन, त्यो घण्टीको आवाज अनि त्यो आरती देख्दा र सुनिरहँदा सबै पीडा यतै सकिन्छ कि भन्ने भइरहेको थियो, सबै भक्तालुहरु त्यसैमा रमाइरहेका थिए। वाचकले भक्तजनलाई ताली पिट्न आग्रह गरिरहेका थिए, सबै खुशीसाथ ताली पिटिरहेका थिए। मन आनन्दित भइरहेको थियो। राष्ट्रिय पत्रिका बाट।
प्रकाशित मिति २७ पुष २०७७, सोमबार १३:३०